Huawei Band 6, ilay smartband feno indrindra eny an-tsena [Analysis] | Vaovao Gadget
Huawei Band 6, ilay smartband feno indrindra eny an-tsena [Analysis]
Miguel Hernandez | 30/05/2021 10:00 | General, hevitra
Ny fehin-tànana marani-tsaina ary koa ny famantaranandro marani-tsaina dia vokatra izay hita ankehitriny eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Na eo aza ny zava-misy tany am-piandohan'ny taranaka amam-panahin'ireto fitaovana ireto dia toa tsy nety ireo mpampiasa ny asany sy ny endriny, ny tena izy dia ny marika Huawei miloka be amin'ny wearables ary ny valiny dia tsara kokoa.
Izahay dia mamakafaka lalina ny Huawei Band 6 farany teo, fitaovana iray manana fahaleovan-tena lehibe sy toetra mampiavaka ny vokatra premium. Jereo miaraka aminay ny zavatra niainantsika tamin'ny Huawei Band 6, ny tanjany ary mazava ho azy koa ny fahalemeny.
1 Fitaovana sy famolavolana: Ankoatra fehin-tànana tsotra
3 Ny efijery lehibe sy ny fizakantenany
Fitaovana sy famolavolana: Ankoatra fehin-tànana tsotra
Na dia miloka amin'ny brasele kely aza ny ankamaroan'ny marika, miaraka amina endrika tsy hita maso ary saika holazainay fa fikasana hanafina azy ireo, Huawei kosa dia nanao ny mifanohitra amin'izay tamin'ny Band 6-ny. Ity fehin-tànana miisa ity dia tena manakaiky ny maha smartwatch mivantana azy amin'ny alàlan'ny efijery, amin'ny habeny ary amin'ny endrika farany. Raha ny marina, tsy azo ihodivirana izy io mampatsiahy antsika vokatra hafa iray an'ny marika toy ny Huawei Watch Fit. Amin'ity tranga ity dia manana vokatra mahafinaritra izahay, miaraka amin'ny bokotra eo amin'ny ilany ankavanana ary atolotra amin'ny kinova boaty telo: volamena sy mainty.
Tianao ve ny Huawei Band? Gaga anao ny vidiny amin'ny vavahady fivarotana toa an'i Amazon.
Dimensions: X X 43 25,4 10,99 MG
lanja: Gramin'ny 18
Boribory somary boribory ny sisiny, ankoatry ny zavatra hafa mba hanasoavana ny faharetany sy ny fanoherany. Mazava ho azy, tsy mahita lavaka ho an'ny mpandahateny na mikrô isika amin'ity bracelet ity, tsy misy izy ireo. Ny ao aoriana dia ho an'ireo tsimatra roa famerana ary ho an'ireo sensor izay miandraikitra ny SpO2 sy ny tahan'ny fo. Ny efijery dia mitana ampahany lehibe eo anoloana ary tsy isalasalana fa izy no mpiorina voalohany amin'ny famolavolana, izay mahatonga ny vokatra manakaiky ny smartwatch. Mazava ho azy fa ny fanamboarana dia plastika ho an'ny boaty, manohana ny fahazavany, amin'ny fomba mitovy amin'ny silipo hypoallergenic.
Ao amin'io Huawei Band 6 Hanana sensor telo lehibe izahay, nyometer, ny gyroscope ary ny sensor an'ny tahan'ny optique an'ny Huawei, ny TrueSeen 4.0 izay atambatra hanome valin'ny SpO2. Ho an'ny ampahany, ny fifamatorana dia ho rojo vy amin'ny Bluetooth 5.0 izay amin'ny ankapobeny dia nanolotra valiny tsara avy amin'ny tanan'ny Huawei P40 izay nampiasainay tamin'ny fitsapana.
Manana fanoherana ny rano izay tsy fantatsika manokana ny fiarovana IP ary ny mety hisitrika azy hatramin'ny ATM 5. Mikasika ny batterie dia manana 180 mAh amin'ny fitambarany izahay izay hiampangana amin'ny alàlan'ny seranan-tsolika famenoana andriamby izay tafiditra ao anaty fonosana, tsy dia ny adapter herinaratra, noho izany dia tsy maintsy manararaotra ireo fitaovana hafa ananantsika ao an-trano isika. Ity Huawei Band 6 ity dia hifanaraka amin'ireo fitaovana iPhone avy amin'ny iOS 9 sy Android amin'ny kinova fahenina. Tsy manana WearOS araka ny antenaina isika, manana Operating System an'ny orinasa Aziatika izay matetika mahavita tsara amin'ireo asa ireo.
Ny efijery lehibe sy ny fizakantenany
Ny efijery dia handray ny jiro rehetra, ary izany dia la Huawei Band 6 mametaka takelaka 1,47-inch izay hibodo ny 64% eo aloha Total araka ny angon-drakitra teknika, na dia marin-toetra aza, noho ny endriny somary miolikolika, ny fahatsapanay dia hoe mbola eo alohan'io izy io, ka toa misy asa famolavolana mahomby ao aoriany. Mifanohitra mivantana amin'ny azy izany zoky lahy ny Huawei Watch Fit, izay 1,64 santimetatra ny efijery azy, ary koa famolavolana mahitsizoro. Tsy fantatsika ny haavon'ny fiarovana ananan'ny efijery, na dia ao anatin'ny fitsapana anay aza dia nanao toy ny vera mahatohitra ampy izy.
Ity tontonana AMOLED ity dia manana fanapahan-kevitra 194 x 368 tebokasy manana haavo mamiratra ambonimbony kokoa noho ny brasele mifaninana toa ny Xiaomi Mi Band fanta-daza. Noho io antony io, ny efijery dia hita mibaribary amin'ny hazavan'ny andro, na eo aza ny tsy fisian'ny famirapiratany mandeha ho azy. Ny ambaratonga mpanelanelana fahatelo dia toa ilay ho mpitaingin-tsoavaly hahafahana mitantana azy mora foana nefa tsy mila mitantana ny famirapiratana ary koa tsy manimba be ny bateria.
Ny haavon'ny efijery dia manana fahatsapana mikasika izay nahavaly tsara ny famakafakana, tsara ihany koa ny fanehoana ny loko, indrindra raha heverintsika fa natao hangeza ny tanantsika ny fitaovana ary tsy hankafy sarimihetsika, ny tiako holazaina dia ny fahafenoan'ny ny loko sy ny mifanohitra aminy dia manintona indrindra ny famakiana ny vaovao izay tian'ny Huawei Band 6 atolotra antsika amin'ny fotoana rehetra. Ny efijery dia toa tsara amin'ny fampiasana isan'andro.
Ny bateria dia tsy ho olana, na dia mety tsy dia vitsy amintsika aza ireo 180 mAh, ny tena izy dia ny fampiasana isan'andro nomenay azy dia afaka nanao ny Huawei Band manolora anay 10 andro fampiasana, izany dia azo hitarina ho 14 raha toa ka manatanteraka fika sasany ianao izay amin'ny farany manakana anay tsy hankafy ilay fitaovana.
Manana fifehezana fihetsika ifotony izahay:
Up: Ivotoerana fampandrenesana
Havia na havanana: Widget sy preset samihafa
Amin'izay dia ho afaka hifandray amin'ny fitaovana isika, amin'izay hanitsy ny famirapiratana, ny sehatra, ny fomba alina ary hijery ny vaovao. Anisan'ireo rindranasa napetraka ananantsika:
Sensor oxygen oxygen
Fanoratana ho an'ny hetsika
Stopwatch, timer, alarm, jiro, fikarohana ary fikirana
Raha ny marina dia tsy ho diso anjara na inona na inona mihitsy isika amin'ity bracelet ity, na dia tsy afaka manitatra azy koa aza izahay.
Tsy azontsika atao ny manantena asa fanampiny avy ao aminy, manana bracelet miisa isa isika izay mamely ny mpifanandrina aminy amin'ny famolavolana sy amin'ny efijery amin'ny vidiny 59 euroRaha ny marina dia mahatonga ahy tsy hanaiky tanteraka ny fifaninanana rehetra. Mety tsy ho hita ny GPS, azoko antoka, fa tsy azo atao ny manolotra bebe kokoa ho an'ny kely. Ny tsena smartband "mora" dia nivadika tanteraka tamin'ity Huawei Band ity.
Navoaka tamin'ny: May 30 amin'ny 2021
Sarin'ny efijery lehibe sy avo lenta
Fahaleovan-tena lehibe ary vidiny ambany dia ambany
Tsy misy GPS natsangana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Huawei Band 6, ilay smartband feno indrindra eny an-tsena [Analysis]
Reolink Argus 3, fakantsary fanaraha-maso somary feno